Gcina ujonge ukhuphiswano lwakho kwi-Intanethi kunye neRivalfox | Martech Zone
Gcina ujonge ukhuphiswano lwakho kwi-Intanethi kunye neRivalfox
NgoMgqibelo, Matshi 14, 2015 NgoLwesihlanu, Matshi 13, 2015 Douglas Karr
I-Rivalfox iqokelela idatha kwimithombo eyahlukeneyo kukhuphiswano lwakho kwaye yenza ukuba idatha ifikeleleke ngokulula kwi-hub eyodwa yedatha yomntu okhuphisana nayo. Imithombo ibandakanya ukugcwala, ukukhangela, iwebhusayithi, incwadana, amaphephandaba, ezentlalo kunye nabantu kunye notshintsho lomsebenzi.
I-Rivalfox sisisombululo se-SaaS esibeka ubukrelekrele bokhuphiswano ezandleni zakho. Siyakholelwa ukuba ngokufunda kwabo ukhuphisana nabo, ungakhula ngokukhawuleza, uphephe iimpazamo kwaye ufumane inzuzo. NgeRivalfox, iinkampani zabo bonke ubungakanani zinokusebenzisa amandla okhuphiswano lobukrelekrele kwaye zenze iindlela eziqhutywa ziidatha.
Iplatifti yoKhuphiswano lobuhlakani beRivalfox ibandakanya
Utshintsho kwiWebhusayithi -Beka esweni iiwebhusayithi okhuphisana nazo kwaye ufumane izilumkiso kwakamsinya nje emva kokuba utshintsho lwenzekile. I-Rivalfox ibalaselisa uhlaziyo, ukuya kwiinkcukacha ezincinci, ukukwazisa malunga nokutshintsha kwesicwangciso esincinci. Nge Cropper yeWebhusayithi yabo, unokuyihluza ingxolo kwaye ujonge kuphela kwiindawo zephepha ezibalulekileyo kuwe.
Ukubeka iliso kwi-Intanethi - Qokelela iindaba, amanqaku kunye nokukhankanywa kuyo yonke imithombo yeendaba eziphambili kwaye uzibonise ngokuzenzekelayo kwideshibhodi yakho nakwiingxelo zemihla ngemihla. Landa umkhondo wento okhuphisana nayo oyifumanayo, rhoqo kunye nendawo yemithombo yeendaba, kwaye uzilinganise ngokuchasene neyakho. Unokwenza ngokwezifiso amagama angamahlanu ahlukeneyo
umncintiswano ngamnye wokugubungela ngakumbi kunye nokuchaneka.
UkuJongwa kweTrafikhi kunye noPhando -Ukubeka iliso kutrafikhi yakho kwaye uyithelekise neyokhuphiswano lwakho, uqaqambisa ezona zinto zibalulekileyo ze-KPIs: utyelelo olukhethekileyo, ukujonga iphepha ngomsebenzisi ngamnye, inqanaba lezothutho lwehlabathi kunye nokunye. Ukufumana ukuqonda okupheleleyo kwezithuthi zabo ukuqikelela amanani okuthengisa kunye nokulinganisa ifuthe lamaphulo okuthengisa. Thelekisa amanani abo ngokuchasene nawakho ukuze ulungelelanise icebo lakho lezendlela. Kuqukiwe inqanaba lehlabathi, inqaku lokuhamba kwetrafikhi, ukujonga iphepha ngomsebenzisi ngamnye, amakhonkco angenayo, inqanaba lokusebenza kukaGoogle, ukulinganiswa kokubaluleka kwewebhusayithi, iindwendwe eziqikelelweyo, ixesha kwisiza, inqanaba lokuhlawula, imithombo yezithuthi, ukukhangela ukugcwala kwabantu, amagama aphambili ahlawulelwayo.
UkuBekwa kweliso kwiMedia yeNtlalo -Beka iliso kumanethiwekhi aphezulu amahlanu athumela iindwendwe kule webhsayithi yokhuphiswano. Jonga ukubandakanyeka kwaye ulandele kuwo wonke umxholo wabo ekwabelwana ngawo.
Ibhlog kunye nokuBekwa kweliso kuThengiso loMxholo -Chonga owona mxholo uphumelele kakhulu okhuphisana nawo kwaye ufumane apho bafumana ezona zabelo zentlalo. Sebenzisa idatha yabo ukucokisa isicwangciso sakho somxholo kwaye uphumelele abaphulaphuli abathembekileyo.
Ukuthengisa nge-imeyile kunye neeleta zeendaba -Ukwazi ukulandelela iincwadana zeendaba ukuze ubone ukuba abo bakhuphisana nabo bazama ukwabelana nabantu ekujoliswe kubo, kwaye babelana kaninzi kangakanani.
tags: isilumkiso sikhuphisana naboUkubeka iliso kwiBhlogizilumkiso zokhuphiswanoukongamela i-imeyileuphando lokhuphiswanoUmlinganiso weBenmarkmarkingUkujonga i-imeyileUkunika ingxelo nge-imeyileesweni okhuphisana naboIindaba kunye nokubeka iliso kwigama elingundoqoyongqngqiRivaliqii-saasUkubeka iliso kuLwazi lwe-SEOukubeka iliso kwimidiya yoluntuisoftware njengenkonzomkhondookhuluUkuJongwa koLwazi ngeNdlelaUtshintsho lwephepha lewebhu